RASMI: Lionel Messi,Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah & Eden Hazard Oo Hogaaminaya Liiska Musharixiinta Ay UEFA U Soo Saartay Xidigii Usbuuca Ee Champions Leaque Ugu Fiicnaa. – WWW.Gool24.net
RASMI: Lionel Messi,Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah & Eden Hazard Oo Hogaaminaya Liiska Musharixiinta Ay UEFA U Soo Saartay Xidigii Usbuuca Ee Champions Leaque Ugu Fiicnaa.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa markasta oo la ciyaaro kulamada Champions Leaque iyo Europa Leaque waxay soo saartaa xidigaha ugu fiican usbuuca si ay jamaahiirta kubbada cagta aduunku cod ugu qaado xidigii ugu fiicnaa waxaayna la shaaciyay siddeeda ciyaartoy ee ku tartami doona xidigii ugu fiicnaa kulamadii saddexaad ee Champions Leaque.
Xidigihii bandhiga ugu fiican ka soo sameeyay kulamadii saddexaad ee Champions Leaque ee talaadadii iyo arbacadii la ciyaaray ayaa liiskan ku soo baxay laakiin waxaa jiri doona halka guulayste oo noqon doona xidiga codka ugu badan ka hela jamaahiirta kubbada cagta aduunka.
Mohamed Salah oo hore ugu soo guulaystay xidigii usbuuca ugu fiicnaa ayaa markale bandhigii uu ka sameeyay kulankii ay Liverpool taariikhda ka soo samaysay ee Maribor waxa uu markale ugu jiraa liiskan in loo doorto xidigii usbuuca Champions Leaque ugu fiicnaa isaga oo waliba laba gool ka soo dhaliyay isla markaana gool caawin sameeyay.
Eden Hazard oo isna kulankii Chelsea iyo AS Roma laba gool ka dhaliyay ayaa xaq u yeeshay in loo soo doorto musharixiinta xidighii usbuucan ugu fiicnaa Champions Leaque wuxuuna xidiga ree Belgium qayb ka yahay xidigaha liiskan ku soo baxay.
Quincy Promes oo ka tirsan kooxda Spartak Moscow ayaa ka mid ahaa xidighii ceebeeyay kooxda Sevilla wuxuuna dhaliyay laba gool kulankii ay kooxdiisu xasuuqa xun u gaysatay Sevilla wuxuuna Quincy Promes ka mid yahay xidigihii ugu bandhiga fiicnaa kulamadii saddexaad ee laga soo ciyaaray Champions Leaque.
Quincy Promes ayaa sidoo kale sameeyay laba gool caawineed, sidaa daraadeed ma jiro xidig liiskan ku jira oo sameeyay laba gool dhalineed iyo laba gool caawineed taas oo la micno ah in uu ku lug lahaa afar gool oo ka mid ahaa shantii gool ee ay kooxdiisa Spartak Moscow ku xasuuqday Sevilla.
Waxay u muuqataa in UEFA ayna liiskan ku soo dhamaystirtay xidighii kale ee bandhiga fiican sameeyay balse aan soo bandhigin qaab ciyaareedkoodii ugu fiicnaa waxaana kala yihiin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr iyo Marcus Rashford.
Ronaldo waxa uu 3 isku day ku dhaliyay 1 gool wuxuuna ka mid yahay liiska xidiga u sharaxan ciyaartoygii usbuuca laakiin sidoo kale Messi ayaa 3 isku day 1 gool ku dhaliyay isla markaana 1 gool caawin ku sameeyay balse midkoodana ma gaadhayo bandhigii Quincy Promes ee uu afarta gool kaga qayb qaatay inkasta codbixinta jamaahiirta aduunka ay saamayn ku leedaha sumcada iyo magaca wayn ee ciyaartoyda qaar.
Neymar Jr oo isna qayb ka liiskan ayaa 2 isku day ku soo dhaliyay 1 gool halka Marcus Rashford uu 3 isku day ku soo dhaliyay hal gool. Genk Tosun oo ka tirsan kooxda Besiktas oo xili ciyaareedkan wacdaro ka dhigaya Champions Leaque ayaa 3 isku day 2 gool kaga dhaliyay kulankii AS Monaco.
Miyaad doonaysaa in aad qayb ka noqoto jamaahiirta go’aaminaysa xidiga usbuuca Champions Leaque ugu fiican? Haddii ay jawaabtu haa tahay waxaad ka codayn kartaa halkan websiteka rasmiga ah ee UEFA. Halka uga codee xidigii usbuuca ee UCL ugu fiicana.